Imifanekiso eqingqiweyo kaDe La Vega ethi ibambe intshukumo yendalo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Besineentsuku ezidlulileyo e Imifanekiso eqingqiweyo kaWilkinson Ngale ndlela bamba ubuhle obungaqhelekanga ukuya kwezinye iikona zolu qeqesho kwaye ke usondele ku-Angela Mia De la Vega.
UDe la Vega uyayifumana loo nto siphefumla ubuhle bokwenyani Kwimifanekiso nganye yobhedu ebamba la maxesha abalulekileyo ebuntwaneni. Sinokuphinda sibuyele kwimeko ye Ukhuseleko olufunyanwa yile ntombazana incinci Kukayise omkhulu kulo ungeno lokuhlala ecingisisa imizuzwana ngelixa sibona umsebenzi kaDe la Vega.
Kulo mkroli, ubugcisa bakhe bunjalo ithuba lokubamba okwenzekayo ukumngqonga, indlela yokwabelana ngombono wakhe nehlabathi ngaphambi kokuba linyamalale phambi kwakhe. Ingqokelela yayo yemifanekiso eqingqiweyo yenziwe ngamanani olutsha anokuzibandakanya namandla amakhulu kunye nomsebenzi opheleleyo wabantwana.
Ngeendlela zakhe, yena Sebenzisa ukukhanya nesithunzi njengendlela yokufumana inkuthazo ejongene nonxibelelwano lweemvakalelo phakathi komsebenzi wakhe kunye nabaphulaphuli bakhe, apho umntu anokubona indawo yobomi ibonakalisiwe kubuso bobuso obuhle kakhulu.
Nanini na xa kunokwenzeka, iDe la Vega sebenza ngemodeli yokwenyani ukubanakho ukucacisa kwinkcukacha nganye ezenza ukuba umsebenzi wabo ube ngowendalo ngokumangalisayo. Ngesi sizathu sinye, ukhetha ngononophelo iimodeli zakhe ukufumana ubuso obunako ukugcina ukungaqondakali kunye nokuphindaphindeka komntu. Inkqubo yakhe yoyilo isuka kumathambo okuqala ukuya kulwakhiwo lokugqibela. Kwimeko nayiphi na into, njengokuba isiqwenga sikhula, sichaza nganye yezinto ezichazayo ukuba indawo yendalo idlulisa imvakalelo yokuhamba kumbukeli.
Umsebenzi omkhulu kwaye apha iwebhusayithi yakho Ukuze akwazi ukulandela yonke imifanekiso yakhe eqingqiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukuqhuma okukhulu kwamandla kunye nobomi kwimifanekiso eqingqiweyo yobhedu yaseDe la Vega